Momba anay |
Tianjin Forman Furniture dia orinasa mitarika eo avaratr'i Sina izay natsangana tamin'ny taona 1988 izay manome seza sy latabatra fisakafoana. Forman dia manana ekipa mpivarotra be dia be miaraka amina mpivarotra matihanina maherin'ny 10, manambatra ny fomba fivarotana an-tserasera sy ivelan'ny Internet, ary mampiseho hatrany ny fahaizan'ny famolavolana tany am-boalohany isaky ny fampiratiana, mihamaro hatrany ny mpanjifa mihevitra an'i Forman ho mpiara-miasa maharitra. Ny fizarana tsena dia 40% any Eropa, 30% any USA, 15% any Amerika atsimo, 10% any Azia, 5% any amin'ny firenen-kafa. FORMAN dia manana 30000 metatra toradroa mahery, manana milina 16 tsindrona ary milina fanapoahana 20, ny fitaovana mandroso indrindra toy ny robot welding ary ny robot fanorona tsindrona dia efa napetraka amin'ny tsipika famokarana
izay nanatsara be ny fahamarinan'ny lasitra sy ny fahombiazan'ny famokarana. Ny rafitra fitantanana matotra miaraka amin'ny fanaraha-maso kalitao ary koa ny mpiasa manam-pahaizana ambony dia miantoka ny vokatra mahomby amin'ny taha avo lenta. Ny trano fanatobiana entana lehibe dia mety misy tahiry 9000 metatra toradroa manohana ny ozinina afaka mihazakazaka ara-dalàna amin'ny vanim-potoana avo indrindra tsy misy olana. Hisokatra ho anao foana ny efitrano fampisehoana lehibe, miandry ny fahatongavanao!
Tena tokony hahaliana anao ny iray amin'ireto entana ireto, azafady ampahafantaro anay. Faly izahay manome anao teny nalaina tamin'ny fahazoana ny antsipirian'ny antsipiriany iray. Izahay dia manana ny mpamorona R&D manokan-tena hihaona amin'ny iray amin'ireo fepetra takiana, Manantena ny handray ireo fanontanianao tsy ho ela izahay ary manantena ny hanana fotoana hiara-hiasa aminao ao anatin'ny ho avy. Tongasoa eto hijery ny fikambananay.
Amin'ny maha vahaolana ambony an'ny orinasa misy anay, ny andiana vahaolana dia notsapaina ary nahazo anay fanamarinana manam-pahefana efa za-draharaha. Ho an'ny masontsivana fanampiny sy ny antsipirian'ny lisitry ny entana, tsindrio azafady ny bokotra hahazoana fanavaozana fanampiny.
CONSULTATION MAIMAIMPOANA 0086-18630605237
ADDRESS Tanàna Shengfang, Tanànan'i Bazhou, Faritanin'i Hebei, Sina